Nika amandla i-HDR kwiWindows 11 - imiyalelo
ikhaya/11 Windows/Yenza i-HDR kwi-Windows 11-imiyalelo
Vangelis7. October 2021
Vula i-HDR phantsi kwe-Windows 11 ngoku inokwenzeka. I-HDR imele iHigh Dynamic Range kwaye inoxanduva lokubonisa ukuqaqamba kunye nemibala ngcono kwimonitha yale mihla. Kubadlali begeyimu, lo msebenzi uyi-asethi kunye nolonwabo olungcono lokuncancisa. Nge Windows 11, iMicrosoft yakhelwe kwinketho yokwenza okanye ukuvala iHDR. Kule miyalelo siza kukubonisa apho unokufumana khona lo msebenzi kwaye ulungelelanise iimfuno zakho.
Nika amandla i-HDR kwiWindows 11
Ngena kwimidlalo, iividiyo kunye neeapps I-HDR (Uluhlu oluphezulu lweDini) umfanekiso oqaqambe ngakumbi. Imiyalelo yenyathelo ngenyathelo yokwenza i-HDR ukuba yenziwe 11 Windows.
Qalisa ifayile ye- 11 Windows izilungiseleloNgokucinezela iqhosha elinqumlayo IWindows + mna ngqisha.
Cofa apha "Inkqubo" kwaye uqhubeke "Intengiso".
Jonga ibhokisi ecaleni kwe "Sebenzisa i-HDR". Ukuba ucofa kutolo oluncinci olukhombe ngasekunene, uya kubona ulwazi oluthe kratya malunga ne-HDR okanye i-HDR.
Yiyo, kulula ukwenza i-HDR kwi 11 Windows sebenzisa. Ukuba awufuni lo msebenzi, unokuwenza ungasebenzi kwakhona.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nokuba ukubek'esweni kweliso i-HDR eqinisekisiweyo, ndwendwela iwebhusayithi yomenzi.
Ukuba uya kuseto> Inkqubo> Umboniso> Umboniso oPhucukileyo kwaye isikrini sakho asibonisi njengesiqinisekisiweyo (ithi ayifumanekanga i-HDR ecaleni kwayo), isenokuba kungenxa yokuba ayinaso isiqinisekiso se-HDR.
akho 11 Windows-Isixhobo kufuneka sibe nekhadi lemizobo elihlanganisiweyo elixhasa ulawulo lwamalungelo edijithali kwi-hardware ye-PlayReady (kumxholo okhuselweyo we-HDR) kunye nee-codecs eziyimfuneko ze-10-bit video decoding kufuneka zifakwe. Izixhobo ezisebenzisa iiprosesa zangoku ziyawuxhasa lo msebenzi. Ezinye iikhowudi zisenokuba sele zifakiwe kwiPC yakho. Ezi ziikhowudi eziqhelekileyo ezifunekayo ukuze udlale ividiyo yeHDR:
HEVC. Ufuna le codec kunye nokubhaliselwa kwepremiyamu ukuze udlale iividiyo ze-HDR kwiNetflix. Ukubona ukuba unayo le codec efakiweyo, vula iisetingi, khetha iiapps> iiapps kunye neempawu, emva koko ujonge ukwandiswa kwevidiyo. Ukuba awunayo le codec efakiweyo, unokuzikhuphela kwiVenkile kaMicrosoft- Izandiso zevidiyo ze-HEVC.
VP9. Udinga le khowudi ukuba udlale iividiyo ze-HDR kwiYouTube. Ukubona ukuba unayo le codec sele uyifakile, vula iVenkile kaMicrosoft kwaye uyikhangele-VP9 izandiso zevidiyo.
I-AV1. Ukubona ukuba unayo le codec sele uyifakile, vula iVenkile kaMicrosoft kwaye uyifumane- AV1 ulwandiso lwevidiyo.
Kukwacetyiswa ukuba ube nemizobo yakutshanje yemizobo (WDDM) efakwe kwiWindows PC yakho. Ukufumana abaqhubi bamva nje, yiya kuseto> Uhlaziyo lweWindows> Iinketho eziPhambili> Uhlaziyo olukhethwayo, okanye undwendwele iwebhusayithi yakho yomenzi wePC
Sebenzisa isikhulisi phantsi kweWindows 11